နည်းပညာဆိုင်ရာစုစည်းမှုများ: ဝင်းကမ္ဘာကျော် (နည်းပညာ မှတ်တမ်း): မြန်မာလို IT နည်းပညာ Ebook အမြောက်အများ ဒေါင်းလိုပ...
ဝင်းကမ္ဘာကျော် (နည်းပညာ မှတ်တမ်း): မြန်မာလို IT နည်းပညာ Ebook အမြောက်အများ ဒေါင်းလိုပါ...:
WYTU MYANMAR ၏ Features အသစ်တခုအနေနဲ့အိုင်တီဆိုင်ရာစာအုပ်တွေ
ကိုအများလေ့လာစေနိုင်ရန် Share to Share စနစ်ဖြင့် Free ပေးသွားပါမည်။
ပါသည်။အဖွဲ့ ရဲ့ နာမည်ကတော့ IT Learning E books ဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်များကို
admin@wytumyanmar.com, shwe.young.lin@wytumyanmar.com နှင့် pyittinehtoun@gmail.com သို့ တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်...
( ကြော်ငြာသလို ဖြစ်သွားရင်လည်း တောင်းပန်တယ် .. ကျွန်တော်တို့လည်း ပိုက်ဆံမရပါဘူး .. လူများများသိတော့ များများပြန်ဖြန့်ဝေရအောင်လို့ပါခင်ဗျာ ... အောက်က စာအုပ်တွေက www.wytumyanmar.com မှာ Member ၀င်မှရမှာပါ .. ဘလော့အားလုံးကို ရွှေ့ပြောင်းတင်ဖို့ မလွယ်လို့ပါ .. နားလည်ပေးပါ )
ယခု တင်ထားသော Ebook များ
ခုတလောခေတ်စားလာနေတဲ့Joomla website ပြုလုပ်ပုံ မြန်မာလိုနှင့် မိမိ...
အများသုံး မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်-ပါဠိအဘိဓါန် By Creator ကိုသားလေး
မြန်မာစာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်း By Creator ကိုသားလေး
3Ds Max ( AutoDesk ) like ( AutoCAD )
AutoCAD 2011 ( Installation & Change settings )
AutoCAD 2011 ( line ,erase , circle , copy )
AutoCAD 2009 (same 2010) Installation
AutoCAD Settings ပြင်ခြင်း ..
AutoCAD Learning Page in Myanmar
A+ စာအုပ် ( ဦးဇော်လင်း )
A+ စာအုပ် (မျိုးသူရ)
A+ ဗဟုသုတနှင့် ကွန်ပြူတာပြုပြင်နည်းများ ( အမြန်တတ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် )
Adobe Acrobat အသုံးပြုနည်းစာအုပ်
Adobe Pagemaker 7.0 စာအုပ်
Adobe Pagemaker နဲ့ မွေးနေ့ဖိတ်စာလုပ်နည်း ( professional နည်းပါ )
Auto Power Shutdown ( Software နှင့် အသုံးပြုနည်း ) by ပစ်တိုင်းထောင်
Acronis True Image Workstation Backup Software အသုံးပြုနည်း
Blog ကိုယ်ပိုင်ရေးပြီး ကိုယ့်ကဗျာတွေတင်မယ်ဆိုရင်
Bluescreen ပေါ်လာခြင်း အကြောင်းရင်း
BAT file သင်ခန်းစာ by ( ကိုသားလေး ; Our Admin )
C++ Programming စာအုပ်
C++ Programming စာအုပ် by ( ကိုသားလေး ; Our Admin )
CSS ရေးနည်း စာအုပ်
Computer Screen ကို လိုသလောက်ပဲ Print Screen ဖမ်းမယ် (Software)
Computer မ၀ယ်ခင် ဖတ်ကိုဖတ်သင့်တဲ့ စာအုပ်
CMS ( Content Management System ) စာအုပ် ( for Web Users )
Craagle Software ( Every Crack & Serial Finder & Very Useful )
Corel Draw Tutorial ( Video File )
Create A mail Filter on Gmail
DNS ( Domain Name System + Others ) စာအုပ် ( Network )
Dream Weaver Tutorial ( WebPageသမားများအတွက်)
Deep Freeze ဘယ်လို သုံးကြမလဲ ( Ebook only )
Dolphin Installation Guide ( by Morris ) ( for Web Users )
မှားဖျက်မိတာပြန်ရှာတဲ့ Software ( Data Recovery )
Format အမျိုးမျိုးပြောင်းနိုင်စေဖို့ အတွက် software လေး ( eg. MP4,Mpeg,WMV to MP3,AVI,3GP )
Fruity Loop တီးနည်း ( for Hip Hop Music Creation )
Flash Song ပြုလုပ်ခြင်း( WYTU၏ flash song group မှ page ကို ပြန်လည်...
Flash Game ရေးနည်း မြန်မာလို
FaceBook တွင် Fan Page လုပ်ခြင်း
Folder Color Change တဲ့ Software
Gmail Gtalk လျှို့ ဝှက်ချက်လေးတွေ ( myanmar version) By Our Admin က...
Gmail Hacking ( password ခိုးနည်းမပါပါ )
Gmail, Facebook (all password hacking by sending mail ) Myanmar
Governer of Porker ( ဖဲရိုက်လို့တော်တော်ကောင်းတဲ့ Game )
G Pass နဲ့ပေးမ၀င်တဲ့site တွေဝင်မယ်
Gmail ကို ကောင်းကောင်းသုံးတတ်သွားမယ့် Gmail Tips & Tricks
Hardware နဲ့ System အကြောင်း
Hard Disk Drive တွေ ပျက်ရခြင်း အကြောင်းရင်းများ
HTML ရေးနည်း by ကိုသားလေး : Our Admin
HTML ( latest Version ; But Big file size & More Better & M...
Hosting Sites ( eg.mediafire ; megaupload ) တို့မှ အချိန်စောင့်စရာမ...
Internet ပေါ်က threats များကို ကာကွယ်ရန်
Internet ပေါ်ကအားလုံး Download ဆွဲမယ် ( Internet Download Manager So... Updated
ICS ( Internet Connection Sharing ) Network ချိတ်နည်း
Java Learning ( မြန်မာလို )
Kaspersky offline update လုပ်နည်းစာအုပ်
Mail Sever ( Using with VPOP .3 ) လမ်းညွှန်
Making Speed Up Ur Website
Mircrsoft Acess 2002 စာအုပ်
My SQL Installation & Usage Guide ( for Web users )
Microsoft Word & Excel 2003
Microsoft Visual Basic စာအုပ် by Blacbk
M&E Drawing Samples For AutoCAD Users
Multiple Installation ( Photoshop , Font , Pagemaker 7.0 , Microsof...
Networking စာအုပ် ( မျိုးသူရ )
Net Meeting 3.01 အသုံးပြုနည်း ( for Network )
Networking Knowledge ( 44 Pages )
PhoXo ဆော့ဝဲလ်နှင့် အသုံးပြုနည်းစာအုပ်
PhotoShop 7.0 ( အခြေခံမရှိသူများစတင်လေ့ကျင့်ဖို့ )
Photoshop exercises from MMPHOTOSHOP.NET
Photoshop2Lessons ( စာရွက်လှန်သောပုံစံနှင့် တံဆိပ်ခေါင်းအတုလုပ်ခြ...
Photoshop Animation .gif file exercises
Photoshop Design Drawing ( for Designer )
ဖိုရမ်တခုတည်ဆောက်ပုံ ( phpbb forum website) မြန်မာလိုရေးထားတာ By Cr...
PHP စာအုပ် by ( ကိုသားလေး ; Our Admin )
Pdf Printer ( အင်တာနက်ကပေးမဒေါင်းတဲ့ ၀တ္တုစာအုပ်တွေ ကူးပစ်မယ် )
PHBB forum ဖန်တီးနည်း စာအုပ် ( for Web Users )
Remote Desktop အကြောင်းနဲ့ အသုံးပြုနည်း
SDLC ( software Depelopment Life Circle ) Knowledges ( for Web Users )
Silver Strip Installation Guide in Local Host ( for Web Users )
Small Home or Office Network (အိမ် ( သို့ ) ရုံးအသေးစားလေးမှာ Netwo...
Streaming Sever ( Networking )
Turbo C++ Programming စာအုပ်
Task Bar ကို မြန်မာမှုပြုမယ် ... ( Window XP only )
Ultrasurf ( Access Denied ဖြစ်တဲ့ဆိုဒ်တွေ ကျော်မယ် )
သူများစက်ထဲ stick ထိုးလိုက်တာနဲ့ .. သူ့ password တွေအကုန်သိတဲ့ ... ...
Primary Hardisk ထဲက Data တွေကို အကုန်ဖျက်မယ့် Virus
Dangerous Virus တွေရေးမယ် ..
Vbulletin Cracked Version Installation Guide ( for Web Users )
Video Conferening sever အသုံးပြုနည်း ( Networking )
Windows Shortcut များ
Window XP, Vista ,7တင်နည်းစာအုပ်
Window Password ဖျက်တဲ့ Software
Web Development Practise ( for Web Users )
Word Press စာအုပ် သုံးအုပ်စလုံး ... ( by Layeik , zuzu aung , mmwor...
ကိုကောင်ကလေးရဲ့ Blog Post များ
ကိုကောင်ကလေးရဲ့ Blog Post များ (2)
ကိုကောင်ကလေး Blog Post ထဲက Virus အကြောင်းများ
MIRC chat အသုံးပြုနည်း မြန်မာလို
Flash Song (or) Flash Game ကူးနည်း .. ( လွယ်ကူပြီး software မလိုပါ )
Typing လေ့ကျင့်တဲ့ ဆော့ဝဲလ် ( သို့ ) ဂိမ်း
Mediafire ကိုဘလော့ခံထားရလို့ ဒေါင်းလို့မရရင် .. ဖြေရှင်းနည်း
Oxford Dictionary ( also can find IDIOM usage - Eng to Eng Dictiona...
Eng-Myanmar (or) Myanmar-Eng Dictionary
FLV/SWF to All Media file (eg. MP4,MP3,WMV,WMA,MPEG,AVI,3GP) ပြောင်...
HTML အကြောင်း Introduction
Internet Download Manager ( Portable ; Full Version )
Flash Song & Game ကူးနည်း ( Full Screen မပေါ်သော၊သူများ Page ပေါ်...
Blog ရေးနည်း ( Blogger လုပ်မည့်သူများအတွက်စာအုပ်နှစ်အုပ် )
Flash Button လေးတွေ ( swismax4အတွက် ) by ကိုဂျွန်ဖြိုး
Flash Button Software ဖြင့်ပြုလုပ်နည်း ( for website decoration ) by ကိုဂျွန်ဖြိုး
ှScreen Capture Software ( သင်ခန်းစာ လုပ်လိုသူများအတွက် )
Photoshop CS4 မြန်မာလို စာအုပ်
မိမိ Page ( web page ) မှာ Flash နာရီလေးတွေ ထည့်ရအောင်
Window XP တင်ထားတဲ့သူတိုင်း တက်တဲ့ Error ကိုဖြေရှင်းမယ်
Firefox သုံးတဲ့သူတွေ ကွန်နှစ်ဆမြန်အောင်လုပ်မယ် .. ( ကျွန်တော်အာမခံသ...
Photoshop CS 1+2+3+4+5 ( Portable ) Stick ထဲထည့်ပြီး အင်တာနက်ဆိုင်တိုင်းမှာ သုံးလို့ရသွားတာပေါ့နော် .. သူငယ်ချင်းများ
PDF to Microsoftword Coverter Softwares
ဓာတ်ပုံများကို အရည်အသွေးမပျက်စေပဲ ပုံကြီးချဲ့တဲ့ Software ( For Pho...
စောက်ရမ်းလန်ထွက်တဲ့ Window Theme ( for EVERY WINDOW )
Nitro PDF Converter ( PDF to Microsoft Word & Excel & Jpeg ...
Requested Ebook ( English Version only )
Adobe Photoshop CS3&CS4 Tutorial
IUAT Software & User Manual
အောက်ပါစာအုပ်နှစ်အုပ်သည် .. ကူးယူနေတုန်း တန်းလန်းမှာပင် .. မှားဖျက်သည့်အထဲပါသွားပါသဖြင့် ..အချိန်များပိုနှောင့်နှေးမည် ဖြစ်ပါသည် .. သည်းခံတော်မူကြပါကုန်
M&E Knowledge for AutoCAD Users
M&E Equations for AutoCAD Users
( IT နှင့်ပတ်သတ်သမျှ သိလိုသောအရာအားလုံးကို မေးမြန်နိုင်ပါသည် .. ဒီနေရာလေးကို Click နှိပ်ပြီး .. Add Discussion နှိပ်ကာ မေးမြန်းနိုင်ပါသည် .. မည်သူမဆိုဝင်ရောက်ဖြေဆိုပေးနို င်ပါသည် ... )
( Photoshop နှင့် Illustrator များကို အသေးစိတ်သင်လိုပါက .. Photoshop Society Group ကိုလာ
AutoCAD နှင့် တခြား Engineering Software များ အသေးစိတ်သင်လိုပါက AutoCAD Workshop ကိုလာခဲ့ပါ ... )
i-phone နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ application လေးတွေသုံးတာတို့ i-phone နဲ့ပတ်သတ်တာတို့ ကို လေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ .. i-devices' tips & trick ဆိုတဲ့ နေရာလေးမှာ လေ့လာနိုင်ပါပြီခင်ဗျာ
Posted by P Kyaw Swa at 12:38 AM